यो पत्रकारिता र अमेरिकी टेलिभिजनको Mastodon को पौराणिक कथा भनिन्छ। यो मानिस संसारभरि धेरै सेलिब्रेटीहरू, चिरपरिचित कलाकार, राजनीतिज्ञ, व्यवसायी सहित कुराकानी गर्न सक्षम थियो। उसलाई पछि दृढ उपनाम फँस "suspenders मानिसलाई।" उहाँले कसले हो? आफ्नो नाम लैरी राजा हो।
स्क्रिन टेलिभिजन भविष्य तारा ब्रूकलिन को अमेरिकी शहर मा जन्म भएको थियो नोभेम्बर 19, 1933। आफ्नो वास्तविक नाम लरेन्स Zhervi गायक छ।
राजा मा बाल्यकाल वर्ष गुलाबी थिएनन्। जब उनको पिता मृत्यु उहाँले पनि दस थियो। उहाँले यसको बारेमा धेरै चिन्तित थियो, र उहाँले थियो यो आधारमा ज्ञान लागि तिर्खा "कमजोर"। तर, लैरी राजा, उच्च विद्यालय स्नातक त्यसपछि चाहेको गर्न धेरै बाँकी जो परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न, काम खोज्न थाले। आफ्नो युवा देखि राजा पेसा प्रसारकले को सपना देख्यो, तर सुरुमा उहाँले एक कुरियर कार्यालय लागि बसोबास गर्न बाध्य भएको थियो। उहाँले लगभग यो आफ्नो दिन को अन्त सम्म monotonous काम सामना गर्नेछ भन्ने तथ्यलाई गर्न resigned थियो। तर केही बिन्दुमा भाग्य उहाँलाई सामना गर्न लागे। उहाँले «सीबीएस» मा अग्रणी थियो मानिसलाई भेटे। उहाँले फ्लोरिडा जाने र एक रेडियो पाहुना रूपमा आफूलाई प्रयास जवान गर्न प्रदान गर्दछ। लामो समय को लागि राजा भाग्य को यो उपहार गर्न सहमत आनाकानी गरेनन्।
अर्को शहर मा आगमन जवान रेडियो मा सानो-ज्ञात डीजे लिए, तर चाँडै प्रसिद्ध लैरी राजा "मिडिया" व्यक्ति, तर अमेरिकी दक्षिण मात्र मापन भयो। उहाँले पछिल्लो शताब्दीको प्रारम्भिक 60-एँ मा दर्शकहरु बीच लोकप्रिय छ जो आफ्नो लेखक कार्यक्रम, invents जहाँ मियामी, सारियो। अर्को दस वर्ष, लैरी राजा सक्रिय छ, र आफ्नो क्यारियर, तिनीहरूले भन्न रूपमा, उकालो जान्छ। उहाँले टेलिभिजन र रेडियो कामदार, तर पनि संवाददाता को मात्र।
तर, 1970 मा, आउँछ कालो पट्टी अमेरिकी टेलिभिजन को एक वित्तीय घोटाले को केन्द्र मा छ जो "Mastodon", जीवनमा। लैरी राजा उहाँले अखबार र टेलिभिजनमा अस्वीकार गरिएको बाहेक, दिवालिया जान्छ। उहाँले फिर्ता फ्लोरिडा जान बाध्य छ। पूर्व टिभी प्रस्तोता उहाँले कठिन जित्यो काम गरे जो आफ्नो प्रतिष्ठा, को remnants गुमाउन छैन कसरि पहेली गर्न थाल्छ।
केही समय पछि, त्यो सम्पूर्ण देश प्रसारण भएको थियो जुन एक नयाँ शो, खोल्न निर्णय गर्छ। उहाँले आफ्नो योजना व्यवस्थापन र उहाँले केबल न्यूज नेटवर्क संग एक सम्झौता मा प्रवेश गर्छ। पत्रकारिता लिजेन्ड भविष्य प्रसिद्ध लेखक, अभिनेता, गायक, राजनीतिज्ञ देखि एक फोन साक्षात्कार लिन्छ कि एक कार्यक्रम नेतृत्व गर्न थाल्छ। नयाँ लैरी राजा एक छप आफ्नो लोकप्रियता मूल्यांकन माथिको उठ्नेछ बनाउँछ। विशेष गरी कडा उहाँले अमेरिकी राष्ट्रपतिको पद लागि चलाउन चाहन्छ भन्ने आफ्नो बयान व्यवसायी रस Perot वृद्धि। यो राजा को स्थानान्तरण मा ठ्याक्कै सुनिन्थ्यो। कि पछि, धेरै राजनीतिज्ञ यो शो मा आफ्नो विश्वासबारे कुरा गर्न एक नियम बनाएको, लेखक जो को "suspenders मानिसलाई।" थियो तर, आफ्नो गियर को हीरो - यो मात्र तिनीहरू परदेशी द्वारा अस्थाइ बन्दि आयोजित गरिएको छ भन्ने विश्वास गर्छन् यस्तो ती रूपमा सेलिब्रेटीहरू, तर बिल्कुल असाधारण व्यक्तित्व, छ।
भन्दा यो दर्शक आकर्षित
धेरै मानिसहरू राजाको लोकप्रियता को गोप्य बारेमा आश्चर्य। यो एकदम साधारण मान्छे जस्तो थियो। तथापि, संचार, क्षमता आफ्नो शैली ध्यान "आफूलाई प्रस्तुत।" त्यसैले मात्र लैरी राजा र अरू कुनै एक सक्छन्। कुनै पनि मामला मा टिभी प्रस्तोता सक्नुहुन्छ बस अन्धो गल्ली मा राख्न जो मुश्किल प्रश्न, सोध्नु छैन। उहाँले अलिकति मात्र थियो ट्रयाक मा फिर्ता कुराकानी निर्देशन र मानिस आफूलाई धेरै जानकारी आफूलाई बारेमा कुरा। पत्रकारिता गुरु एक पटक उहाँले कुनै पनि संचार रणनीति निर्माण, अग्रिम कुरा गर्न तयार कहिल्यै बताए। होइन, यसलाई नै द्वारा हुन्छ। लैरी राजा, जसको पुस्तकहरू पहिले नै हाम्रो देशमा सबै भन्दा राम्रो विक्रेता बनेका छन्, शब्द को क्लासिक अर्थमा एक पत्रकार रूपमा आफूलाई को लाग्यो कहिल्यै छ - उहाँले आफ्नो गतिविधि रहस्यमय शब्द "Infotainment" कल रुचि।
आफ्नो काम को एक विशिष्ठ सुविधा - कसैसित मजाक गर्ने क्षमता छ। र उहाँले आफ्नो अनुहार मा बिल्कुल शान्त अभिव्यक्ति एउटा peculiar तरिका यसले गर्छ। राजा र प्रसारण रेकर्ड र प्रत्यक्ष मा गए। उहाँले टेलिफोन वा भिडियो लिंक द्वारा साक्षात्कार गर्न उत्तिकै खुसी हुनुहुन्छ। पनि व्हाइट हाउस मा मानिसहरू कुरा गर्न भयो।
आज, 30 हजार भन्दा बढी Larri Kinga साक्षात्कार को खाता, आफ्नो साप्ताहिक क्रमिक बिवरण संग मा सम्पूर्ण देश पूरा गर्दछ। यो सुन्न र ग्रह मार्फत लाखौं मानिसहरू हेर्न, पढ्न छ।
भ्लादिमिर पुटिन संग संचार
पर्याप्त उज्यालो र साधारण छैन रूस लैरी राजा संग पुटिन गरेको साक्षात्कार भयो। अमेरिकी पत्रकार हाम्रो देश को राष्ट्रपति विभिन्न समस्याहरू एक सम्पूर्ण शस्त्रागार सोधे, तर केही कारणले मात्र एक लागि सम्झना छ - "कुर्स्क" sunk पनडुब्बी बारेमा। साक्षात्कार प्रकोपबाट पछि एक महिना भयो किनभने निस्सन्देह, उहाँले जल थियो।
आफैलाई मा हाँस्न क्षमता
यो लैरी राजा मात्र होइन आफ्नो interlocutors संग संवाद मा हास्य को एक अर्थमा प्रयोग, आफूलाई लागि तर पनि जोड दिए हुनुपर्छ। उहाँले तिनीहरू त्यहाँ उहाँले एक विशिष्ट छ suspenders पहनता कुरा हो भन्ने महसुस किनभने, एक मजाक गर्न averse छ, र आफूलाई मा आवाज को टोन, उहाँले अक्सर slouches।
लैरी राजा कहिल्यै काम र घर मा, उहाँले फरक व्यवहार भन्दै, व्यक्तिगत जीवन र क्यारियर मिश्रित।
लैरी राजा पुस्तक
पहिले नै जोड रूपमा, लैरी राजा - लेखक छ लोकप्रिय पुस्तकहरू, सहित: "के म, pundits, राजनीतिज्ञ र राष्ट्रपतिहरु सिक्नुभयो" "राजा यो भन्नुहोस्।"
र तिनीहरूले विश्वभरिका धेरै व्यापक readership छ। बस एक अद्वितीय कृति Larri राजा बनाइयो। "कसरी, कुनै कुरा गर्न कुनै पनि समयमा, कहीं" - उहाँले त्यो बाटो भनिन्छ। यसलाई अब Communicative संवाद सिक्न चाहनेहरूलाई लागि पुस्तिका छ
व्यक्तिगत जीवन सधैं चिरपरिचित टिभी प्रस्तोता राम्रो रहेको छ छैन। पत्नी Shawn राजा तिनको सम्बन्ध Sausvik-लगभग छोडपत्र को खतरा अन्तर्गत, यो प्रक्रिया को लागि कागजातहरू कानुनी रूपमा formalized गरिएको छ। अझै पनि पछि यो परिवार सँगै राख्न निर्णय भएको थियो। लैरी राजा - सात बच्चाहरु को पिता।
Elena Potanin ( "के कहाँ जब ???"): जीवनी, पेसा, व्यक्तिगत जीवन
Kokorekina ओल्गा। टिभी प्रस्तोता Kokorekina। जीवनी व्यक्तिगत जीवन, फोटो
इल्या Novikov: "के कहाँ ??? जब"
नरिवल कपाल तेल
को पोलिग्राफ कसरी पारित गर्न, र यो उहाँको धोका गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर
मांसपेशी वृद्धि लागि उचित पोषण
Gunsmith - एक पेशा? आधुनिक संसारमा gunsmiths को हुन्?
पूर्ण बोर्ड, वा पूर्ण बोर्ड
लाभ र हानि: देखि जई Kvass। जई देखि Kvass: नुस्खा
रोटेशन र क्यामेरा तंत्र